Android အတွက်အကောင်းဆုံးပဟေဠိ Apps ကပ | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ဘ‌‌လော့ခ် » Android အတွက်အကောင်းဆုံးပဟေဠိ Apps ကပဤတွင်အားလုံးသတင်းအချက်အလက်
အန်းဒရွိုက်အားလုံးပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနအကောင်းဆုံးပဟေဠိ Apps ကပဤတွင် APK ကို
သငျသညျအသေးအဖွဲဂိမ်းသို့မဟုတ်တီဗီရှိုး၏ပရိတ်သတ်ဖြစ်ပါသလား အဘယ်သူသည်အသေးအဖွဲဂိမ်း (မိမိတို့၏အသိပညာတိုးတက်စေရန်နှင့်အပြင်ဆုလာဘ်အနိုင်ရကူညီနိုင်သည်ကိုအထူးသဖြင့်သူတို့အား) မချစ်ရသနည်း ဒါကြောင့်ဂိမ်းအသေးအဖွဲမှကြွလာသည့်အခါကွဲပြားခြားနားသောလူဦးကွဲပြားခြားနားသောထင်မြင်ချက်များရှိသည်။ အားလုံးအားလုံးအတွက်ဤဂိမ်းကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ကြ၏။ ဤမျှလောက်များစွာသောပဟေဠိ apps များရှိအဲဒီမှာထွက်ဖြစ်ကြသည်ကတည်းက, သင်က hard တရှေးခယျြဖို့ရှာတွေ့လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ကသူတို့ချဉ်းကပ်မှုအတွက်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ကြပြီးအောင်မြင်သောပါပြီထားတဲ့ Android အတွက်အကောင်းဆုံးပဟေဠိ apps များ, စာရင်းတစ်ခုဖန်တီးပြီ, မစိုးရိမ်ပါနဲ့။
စာရင်းဖော်ပြထားသောထိုးနှက် android- များအတွက်အကောင်းဆုံးပဟေဠိ apps များအပေါငျးတို့သအသိအမြင်ရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်
Millionaire - အသေးအဖွဲများနှင့်အန္တရာယ်ကမ္ဘာ့ဖလား
ဒီအမျိုးအစားထဲမှာ TV ပေါ်မှာလူကြိုက်အများဆုံးဂန္၏တရားဝင်မိုဘိုင်းခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျမျိုးစုံရွေးချယ်မှုအမျိုးအစားဉာဏ်စမ်းပဟေဠိ, Lifeline နှင့် Millionaire အသေးအဖွဲအတွက်၎င်း၏ရှိုးများကဲ့သို့ပင်ကိုမူလဂရပ်ဖစ်နှင့်အတူဂန္ဂိမ်းကစားနိုင်ပါတယ်။ အန္တရာယ်ကမ္ဘာ့ဖလားက၎င်း၏တီဗွီရှိုးနှိုင်းယှဉ်ပါကအလွန်လွယ်ကူသည်။ ယင်း၏အရင်းအမြစ်ခံစားနေချိန်မှာဤတွင်, သငျသညျ, ရှိသမျှမျိုးစုံ-ရွေးချယ်မှုမေးခွန်းများကို play ပါလိမ့်မယ်။
အသေးအဖွဲကိုလည်း Google Play စတိုးအပေါ်အလွန်လူကြိုက်များဂိမ်းအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့နှစ်နှစ်နောက်ကျောကိုကြည့်သည့်အခါမဆိုပဟေဠိ apps များမရှိနိမိတ်လက္ခဏာရှိခဲ့သည်။ ယနေ့တွင်သင်တို့သည်ကွဲပြားခြားနားသောကစားသမားများအတွက်အဲဒီမှာအထဲက options များများများရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
HQ - အသေးအဖွဲ & စကားအသစ်တစ်ခုကိုအဆင့်အထိပဟေဠိဂိမ်းကစားခြင်းကိုယူထားပါတယ်သောစင်ကြယ်သောအသေးအဖွဲဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ9ညနေ ET မှာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတိုက်ရိုက်ပဟေဠိပြိုင်ပွဲအိမ်ရှင်အဖြစ်။ တခါတရံမှာ, ကရက်အပေါ်3ညနေ ET ပေါ်တွင်ပြိုင်ပွဲပါဝင်သည်။ ဒီ app ကိုလည်းချည်နှောင်-ins သည့်ဆောင်ပုဒ်နှုန်းအဖြစ်, ထိုကဲ့သို့သောသစ်တစ်ခုအဖြစ် HQ စကား အားကစား trivia mode ကိုနှင့်အတူကစားသမားဘုံစာပိုဒ်တိုများနှင့်စကားများခန့်မှန်းထားတဲ့အတွက်ဂိမ်းကို။
အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကစားသမားတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ trivia ဂိမ်းကစားခြင်းအားဖြင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတစ်ဦးငွေသားဆုအနိုင်ရနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ငွေသားများအတွက်အချက်များနှင့်အတူကဆုဆုရရှိသူ။ အဲဒီမှာတစ်ဦးချင်းစီဂိမ်းထဲမှာ 12 မျိုးစုံရွေးချယ်မှုမေးခွန်းများကိုဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ကစားသမား 10 စက္ကန့်အတွင်းတစ်ဦးချင်းစီမေးခွန်းကိုဖြေဖို့ရှိသည်။ သင်မှန်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ဖြေဆိုခြင်းအားဖြင့်ဆုချီးမြှင့်ငွေကိုတပ်စုစုပေါင်းပမာဏ၏ဝေစုရရှိနိုငျသညျ။ ရုံးချုပ်က၎င်း၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ-တည်ခင်းဧည်ဂိမ်းများ, trivia မေးခွန်းများကိုနှင့်စစ်မှန်သောငွေသားဆုမှတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ trivia ကျေးဇူးတင်စကားမြဲ-shot ဆုရှင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာအဟောင်း-ကျောင်းကိုစားပွဲပေါ်မှာဂိမ်းမိုဘိုင်းဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ အသေးအဖွဲ Crack အမှန်တကယ်က၎င်း၏ကြင်နာတဲ့လက်ရာဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကဘီးလည်နဲ့အနုပညာ, ဖျော်ဖြေရေး, သိပ္ပံ, ပထဝီ, အားကစားနှင့်သမိုင်းများကဲ့သို့ဘုံသည့်အကြောင်းအရာများကနေမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်ရှိသည်။ သင်သည်သင်၏မိတ်ဆွေများကိုစိန်ခေါ်သို့မဟုတ်ပင်သင်က Facebook ကနေတဆင့်တက်လက်မှတ်ထိုးတစ်ချိန်ကကမ္ဘာကြီးကိုဖြတ်ပြီးသူစိမ်းတွေနဲ့ကစားနိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာသင်အသိပညာဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာသွားလာခြင်းနိုင်ပါတယ်ဆိုလိုသည်။ သငျသညျအသီးအသီးခေါင်းစဉ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အပေါငျးတို့သဇာတ်ကောင်စုဆောင်းရန်ရှိသည်။ ဖြေဆိုရန်မေးခွန်းများကို၏မျိုးစုံ-ရွေးချယ်မှုပုံစံရှိပါတယ်။ သငျသညျမှားယွင်းတဲ့ဖြေဆိုပြီးတာနဲ့သည်အလှည့်2ရက်အတွင်းဖြေဆိုရန်သူသည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တတ်၏။ အသေးအဖွဲ Crack အခွင့်အလမ်းအားဖြင့်ဤမျှလောက်လူကြိုက်များရရှိခဲ့မထားပါဘူး။
အဆိုပါမေးခွန်းများကိုမဟာဗျူဟာကျကျစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသောအလွန်ခက်ခဲတဲ့ဖြစ်ကြ၏။ တချို့လွယ်သော်လည်းကစားသမားပျင်းစရာကောင်းသည့်အကြောင်းအရာများကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်သူတို့ကိုအကဲဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် app ကိုမေးခွန်းများကိုပြသရန် 20 ဘာသာစကားများထောက်ခံပါတယ်။ ဒါဟာစိတ်ကြိုက်အကြောင်းအရာများနှင့်အတူအေးမြဂရပ်ဖစ်တယ်သိရသည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့အခမဲ့ဗားရှင်းအတွက်ကြော်ငြာတွေအများကြီးပြသထားတယ်။
QuizUp လည်းအန်းဒရွိုက်အတွက်အကောင်းဆုံးပဟေဠိ apps များထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာအခြားလူမှုရေးအသေးအဖွဲဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမယ့်အခြားသူတွေနဲ့မတူဘဲ။ လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာဒီဂိမ်းကအရမ်းစိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်ခေါင်းစဉ်ရွေးချယ်နိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ ယေဘုယျအသိပညာကနေအမျိုးမျိုးသောတီဗီစီးရီးနှင့်အခြေခံဘာသာစကား-related မေးခွန်းများနှင့်ဆက်စပ်သောမေးခွန်းများမှရွေးချယ်ဖို့အကြောင်းအရာများရာပေါင်းများစွာရှိပါသည်။
သင့်ရဲ့စပိန်ကျင့်သုံးနေချိန်တွင်ထိုကွောငျ့သငျနေ့စဉ်စိန်ခေါ်မှုခံစားနိုင်။ QuizUp Real-time အတွက်ကစားရန်ပျော်စရာဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန် 10 စက္ကန့်ရှိသည်။ သင်မေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်ခေါ်ဆောင်သွားပြီအချိန်နှုန်းအဖြစ်မှတ်ရရှိပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအစားရှည်လျားသောတိုက်ပွဲများ၏တစ်ခုကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်စိန်ခေါ်မှုများအပေါ်အခြေခံသည်။
94% ကဒီမှာအခြားမည်သည့်ပဟေဠိဂိမ်းကြိုက်နှစ်သက်သည်မဟုတ်။ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အတူရောထွေးရမထားပါနဲ့။ နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အကြံပြုထားသကဲ့သို့, သင်အနည်းဆုံးဖြေဆိုသင့်ပါတယ် 94% မေးခွန်းများကို၏ညာဘက်။ ဥပမာအားဖြင့်, အခါသင်သင်တစ်ဦးခဲတံ box ထဲမှာရှိလတံ့သောအရာကိုဟုမေးကြသည်။ သငျသညျသငျ့စိတျအပေါငျးတို့သသောအရာတို့ကိုစာရင်းပြုစုပါလိမ့်မယ်။ နောက်ပိုင်းတွင်အပေါ်သင်စာရင်းဝင်ကြပါပြီတစ်ဦးချင်းစီကို item များအတွက်ရာခိုင်နှုန်းရပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာနေပါစေသင့်ရဲ့အသက်အရွယ်သည်အဘယ်အရာကိုသင်ကစားနိုင်ပါတယ်အလွန်ပျော်စရာနဲ့ရိုးရိုးဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ 94% အကြောင်းကိုနောက်ထပ်ကောင်းသောအရာကအတော်ကြာအဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ်နှင့်သင်အဆုံးမဲ့ပျော်စရာရပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဒီဂိမ်းကိုသာတစ်ခုတည်းကစားသမားအဘို့ဖြစ်၏ကတည်းကသင်ပင်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ဒီမှာသာဖမ်းသင်သည်ကိုယ်တိုင်အဖြေကိုရိုက်ထည့်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာပါပဲ။ သငျသညျအင်္ဂလိပ်မသိလျှင်ကြောင့်နှောင့်ရှက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ သင်သည်မည်သည့်အဖြေကမှားစာလုံးပေါင်းလျှင်, app ကိုဖတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
သင်ရိုးရာ minimalistic နှင့် Single-player ကိုအသေးအဖွဲဂိမ်းရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, ပဟေ.ိ သင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးလျောက်ပတ်သည်။ ပင်ဒီဇိုင်းကအရမ်းအလင်းဖြစ်၏။ သို့ရာတွင်ထိုသို့အတူနှောငျ့ယှကျကြပါဘူး။ အဆိုပါဂိမ်းဖြတ်ပြီးဖလားကိုရယူခဲ့တာပါ 6000 မေးခွန်းများနှင့်ရေတွက်ရှိပါတယ်။ သငျသညျရှေ့သှားစဉျ, မေးခွန်းများကိုခက်ခဲတဲ့ရတဲ့စတင်ပါ။
မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန် 17 ကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းအရာများရှိပါတယ်။ ဒါဟာအစထိုကဲ့သို့သော 2-ရိုက်ချက်များ, 50 / 50 သို့မဟုတ်လှန်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြစ် TV ပေါ်မှာဟောင်းနွမ်း-ကျောင်းကို trivia ဂန္ဖြင့်မှုတ်သွင်းခံရဖို့ပုံရသည်ကြောင်းကူညီပေးသည်ပေးပါသည်။ သင်တို့သည်လည်းသွားလာရင်းသင်၏အချိန်သွား Quizoid အော့ဖ်လိုင်းကစားနိုင်ပါတယ်။
Google Play စတိုးဂိမ်းများကိုဤအမျိုးအစားရာပေါင်းများစွာနှင့်အတူရေလွှမ်းခြင်းနှင့်သူတို့ထဲကအတော်များများပျင်းစရာဖြစ်ကြပြီးသူတို့ကိုဖြေရှင်းရေးဖြစ်ပါတယ်မဖြစ်နိုင်ဘေးတွင်ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအအမှတ်တံဆိပ်ဂိမ်းကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်သင်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုကောင်းကောင်းသိကြောင်းသေချာသည်။ သို့သော်အမှတ်တံဆိပ်ပဟေဠိကြီးမားတဲ့လိုဂိုဒေတာဘေ့စရှိပြီးပါကအခမဲ့လာသည်။
ပုံးထဲမှာထည့်သွင်းဖို့အက္ခရာများရှိပါတယ်။ သငျသညျအဖြေကိုရိုက်ထည့်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ ဖြတ်သန်းဖို့အများကြီးအဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ်။
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အကြံပြုသည့်အတိုင်း PopcornTrivia ရုပ်ရှင်ချစ်သူများ်ထမ်းဆောင်ဖို့သက်သက်သာဆက်ကပ်အပ်နှံထားသည်။ ဒါဟာ cinephiles မေးကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများအတွက်ရုပ်ရှင်နှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများကိုရှိပါတယ်။
အကြှနျုပျတို့သညျကို Android များအတွက်အကောင်းဆုံးပဟေဠိ apps များအကြောင်းကိုဖတ်ရှုခြင်းခံစားခဲ့ကြမျှော်လင့်ပါတယ်။ ကြှနျုပျတို့သညျဤစာရင်းတွင်မည်သည့် app ကိုလွဲချော်ကြလျှင်, သင့်ထင်မြင်ချက်ကိုဝေမျှဖို့အခမဲ့ခံစားရပါ။
android ဖုန်းပဟေဠိ app ကို Android အတွက်အကောင်းဆုံးပဟေဠိ Apps ကပ android ဖုန်းများအတွက်ပဟေဠိ App ကို